Jilaaga caanka ah Amitabh Bachchan "Cali Dheere" oo ka bogsaday korona - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Jilaaga caanka ah Amitabh Bachchan “Cali Dheere” oo ka bogsaday korona
August 2, 2020 at 18:48 Jilaaga caanka ah Amitabh Bachchan “Cali Dheere” oo ka bogsaday korona2020-08-02T18:48:45+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Mid ka mid ah jilayaasha filimada India, Amitabh Bachchan, oo Soomaaliduna u taaqano “Cali Dheere” ayaa laga saaray isbitaal uu u jiifay fayraska korona oo ku dhacay.
Bishii hore ayaa jilaagan 77 jirka ahi u sheegay malaayiin qof oo ku taxan boggiisa uu ku leeyahay Twitter ka in laga helay fayraska korona.
Maanta oo Axad ah ayuu u sheegay dadka jecel in uu isbitaalka ka baxay markii uu ka dawoobay fayraska oo baadhitaankii ugu dambeeyey muujiyey in laga waayey.
Wuxuu uga mahad celiyey taageerayaashiisa ducadoodii sidoo kalena wuxu u mahad naqay shaqaalaha Isbtilaalka Nanavati Hospital ee ku yaal Mumbai oo uu sheegay in ay u fidiyeen “daryeel heer sare ah”.
Amitabh Bachchan ayaa la dhigay isbitaalka Nanavati ee ku yaala galbeedka magaalada Mumbai, waxaana uu ku baaqay in qof walba oo isaga la kulmay uu iska baaro xanuunka.
Macbad lagu cibaadeysto oo ku yaalla bartamaha magaalada Mumbai ayaa waxaa isugu yimid wadaaddo Hinduu ah oo qushuucsan, si ay ugu duceyaan jilaaga oo ay Soomaalida u taqaano Cali Dheere.
Wiilka uu dhalay ‘Cali Dheere’ oo lagu magacaabo Abishek Bachchan iyo iyo xaaskiisa Aishwariya Rai ayaa sidoo kale laga helay feyraska Corona.
Wadaaddadan waxa ay afka ku hayaan duco ay Alle uga baryayayan in uu xanuunka ka dul qaado ‘Cali Dheere’, waxaana gidaarrada macbadka ay ku xardheen sawiradiisa iyo kuwa qoyskiisa.
Waxaa goobaha loogu duceynayo jilaaga laga shiday wax u muuqda foox uu qiiq badan ka baxayo oo ay dhinacyada ka fadhiyaan wadaad diimedyo, waxaana sidoo kale goobahaas dhexyaalla sanamka ay caabudaan dadka Hinduuga.
Malaayiin qof oo Hindiga ku sugan iyo taageerayaasha kale ee uu jilaagan ku leeyahay caalamka ayaa u rajeynaya inuu soo caafimaado.
Wadaaddada waxay aaminsan yihiin in ducadooda la aqbali doono, oo Amitab Bachhan uu ka kici doono xanuunka.
”Sababta halkan aan isugu nimid waxay tahay in aannu u duceyno Amitab Bachan iyo willkiisa Abishek Bachan, maadaama laga helay feyraska Corona, waxaana Alle ka baryeeneynaa inay caafimaadaan, si ay dib noogu soo laabtaan”, ayuu yiri Satendra Tiwary oo kamid ah wadaaddada ducada u fadhiya.
Wadaad diimeesyadaas oo keliya ma aha dadka ku duceysanaya in Amitab uu ka caafimaado feyraska Corona, balse sidoo kale waxaa jira qaar kamid ah taageerayaashiisa oo sheegay in iyaguna ay ku duceysanayaan in Amitab Bachchan ama Cali Dheere uu mar kale cagihiisa isku taago.
”Si lamid ah sida qoysaskeenna aannu ugu duceyneyno inay ka bogsadaan xanuunka ayaan isna ugu duceneynaa, jilaaga weyn waxaa uu wajahayaa xaalad adag, marka waxaanu ku duceysaneynaa in uu si nabad ah uga gudbo marxaladdaas oo uu ka bogsado feyraska”, ayuu yiri Kailash Mali.
Amitab Bachan oo isagu dhawaan la dhigay isbitaalka ayaa haatan lagu soo warramayaa in xaaladiisa ay wanaagsan tahay.
Jilaagan oo ka qeyb galay in ka badan 200 oo filim ayaa dad badan oo ku nool dalka Hindiya waxay ku hana-qaadeen daawashada aflaantiisa. Wuxuu xirfadda jiritaanka kusoo guda jiray in ka badan 50 sano oo xiriir ah, isagoo ilaa haddana aan wali ka howlgabin.
Soomaali bandan ayaa Cali Dheere ama Amitab Bacahn ku xusuusta aflaan badan oo uu kamid yahay Filimkii caan baxay ee Sholay, kaas oo soo baxay sanadkii 1975-kii, ilaa imikana aan laga xiisa dhicin.
Inuu cudurka ku dhacay waxay caddeyneysaa sida Feyraska Corona uu ugu galgalanayo dalka Hindiya oo ah waddanka saddexaad ee laga helay kiisaska ugu badan fayraska corona ee caalamka
« Chines ae mbassador to Somalia in Somaliland over Taiwan row
Muxuu ka yiri Éder Militão kulanka la wada sugayo ee Man City & Maqnaanshiyaha Sergio Ramos? »